China Energy fisotroana famenoana masinina sy mpamatsy | Higee
Ny tsipika milina famenoana angovo ataontsika dia mampifangaro ny tavoahangy tavoahangy, famenoana ary famonoana milina monoblock iray. Ireo dingana telo dia tanterahina ho azy tanteraka. Ny famenoana tavoahangy PET na tavoahangy vera na afaka tavoahangy rehetra dia azo alamina.
Masinina mameno angovo 3 amin'ny 1 Monobloc Production Line
2. Masinina famenoana zava-pisotro misy herinaratra (fanasana / famenoana / fametahana mono-in-1 mono-block)
Ny tavoahangy dia miditra amin'ny ampahany manasa ny masinina telo-iray amin'ny alàlan'ny mpampita rivotra. Ny gripper apetraka amin'ny disk rotary dia mahatratra tavoahangy ary mamadika azy mihoatra ny 180 degre ary mahatonga ny tavoahangy tavoahangy hidina. Ao amin'ny faritra fanasan-damba manokana, ny banga amin'ny gripper dia mamafy rano hanasana ny tavoahangy anaty tavoahangy. Aorian'ny fandroana sy fikosehana dia mihodina mihoatra ny 180 degre ny tavoahangy manaraka ny lalamby mpitari-dalana ary manandrify ny lanitra ny tavoahangy. Avy eo ny tavoahangy manasa dia afindra amin'ny ampahany mameno amin'ny alàlan'ny starwheel tavoahangy. Ny tavoahangy miditra ao anaty mpihaza dia mitazona takelaka mitazona hatoka. Ny valizy famenoana ataon'ny cam dia afaka mahatsapa ambony sy ambany. Izy io dia mandray fomba famenoana tsindry. Misokatra ny valizy famenoana ary manomboka mameno izy rehefa mihetsika izy ary mikasika ny tavoahangy, miakatra ny valizy mameno ary avelao ny tavoahangy rehefa vita ny famenoana, ny tavoahangy feno dia afindra amin'ny faritra mikatona amin'ny alàlan'ny kodiarana fihodinan'ny hatoka. Ny antsy fijanonana dia mitazona ny tavoahangy, mitazona ny tavoahangy tsy miodina. Ny lohan'ny visy dia mijanona amin'ny revolisiona sy ny autorotation. Izy io dia afaka mamita taranja capping iray manontolo, anisan'izany ny fisamborana, fanerena, fikororohana, famoahana amin'ny alàlan'ny asan'ny cam. Ny tavoahangy feno dia afindra amin'ny conveyor outlet tavoahangy amin'ny dingana manaraka amin'ny alàlan'ny starwheel. Ny masinina manontolo dia voahidy amin'ny varavarankely, ny haavon'ny varavarankely mihidy dia avo kokoa noho ny tampon'ny masinina 3 in 1, eo ambanin'ny varavarankely mihidy no misy fivoahan'ny rivotra
● Afa-tsy ny rafitra midina, ny faritra ampita ary ny ampahany sasany izay tsy maintsy vita amin'ny fitaovana manokana. Ny kojakoja hafa dia vita amin'ny vy vy 304.
● Ny roller mitondra vita amin'ny vy vy, ny peratra famehezana dia vita amin'ny fitaovana EPDM, ary ny plastika vita amin'ny UMPE.
● Ny gripper dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny toerana itazonana ny tavoahangy dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony ihany koa, raha ampitahaina amin'ny fehikibo vita amin'ny fehin-kibo nentim-paharazana, dia fahadiovana, mateza ary tsy misy faritra mitafy haingana, ny faritra visy amin'ny tavoahangy tavoahangy fadio ny fandotoana azy amin'ny fehikibo.
● Ny gripper dia manana nozongo spray mahomby be, afaka mivoatra amin'ny toerana misy ny tavoahangy ao anaty tavoahangy izy ary afaka mamonjy rano manasa. Misy fonony eo ambonin'ilay noza-tsifotra izay afaka misoroka ny fiparitahan'ny rano; ary misy ny fantsom-panafody mifehy sy ny fantsom-panafody eo ambanin'ireo nozera.
● Ny fotoana fanasana dia azo antoka mandritra ny 2 segondra.
● Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haavon'ny faritra rotary mba hifanaraka amin'ny haavon'ny tavoahangy samihafa
● Ny antony manosika dia avy amin'ny rafitra voatosika ao amin'ilay rafitra nolalovan'ny fitaovana.
● Ny famatsiana rano manasa dia fehezin'ny valizy solenoid.
● marika tsy voatanisa marika anti-harafesina malaza namboarina izay afaka mampihena ny fandotoana ny famenoana ny tontolo iainana.
● Ny takelaka rotate dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony 304, fitondra nifikitra mafy nifify.
● Ny valizy mekanika fanerena dia nampidirina ny firafitry ny vahiny mandroso miaraka amin'ny hafainganam-pandeha famenoana haingana, tsy misy paosy zoro fahadiovana, faritra famehezana vitsivitsy, ary fifehezana ny haavon'ny rano. Ny valizy iray manontolo dia vita amin'ny vy tsy voadio amin'ny sakafo.
● Misokatra ny valizy famenoana ary manomboka mameno rehefa mihetsika izy ary mikasika ny tavoahangy, miakatra ny valizy mameno ary avelao ny tavoahangy rehefa vita ny famenoana.
● Ny famatsiana zava-pisotro dia mandray ny valin'ny fantsom-boalavo automatique automatique hifehezana ny tanky misy rano.
● Ny fitondra mihetsiketsika dia nitazona tsy fitahirizana, izay afaka mampihena ny fandotoana ny famenoana ny tontolo iainana. Rolling bearing vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ny peratra famehezana dia vita amin'ny fitaovana EPDM, ny plastika dia vita amin'ny UMPE.
● Ny antony manosika ny mpameno dia avy amin'ny rafitra voatosika ao anaty rafitra ary ampandalovin'ny fitaovana.
● Ny kapila lehibe dia mandray kodiarana, miaraka amin'ny fahombiazan'ny avo, ny tabataba, ny fiainana lava, ny fikojakojana mora, ny fanosorana ampy, ny menaka afaka manosotra centralizing mandeha ho azy, mandray transducer amin'ny hafainganam-pandehan'ny môtô lehibe hifehezana, ny masinina dia mandray fotoana fohy hanovana fiovana . Ny fitaovana ho an'ny sehatra sy ny endriny iray manontolo dia vy vy misy vy vy any ivelany.
● Ny milina dia fehezin'ny PLC avy hatrany, lesoka amin'ny fampisehoana tsipika, toy ny sakan-tavoahangy, tsy fahampian'ny cap sns.
● Ny ampahany lehibe sy ny singa elektrika ao amin'ny masinina dia mandray vokatra entina.
Ity singa ity dia ny mari-pahaizana avo indrindra amin'ny milina 3-in-1, zava-dehibe ho an'ny milina ny mihazakazaka milamina sy ny kalitaon'ny vokatra.
● Screwing head cating (ny ampahany lehibe izay afaka manome toky ny kalitaon'ny fametahana), ny manampahaizana manatsara ny famolavolana vy vy, io fanatsarana io dia afaka mampihena ny tahan'ny tsy fahampian'ny capping ary ny toetra nentim-paharazana mora apetraka sy manitsy ny torolaky ny famonoana loha.
● Ny lohan'ny scapting cap dia famolavolana tanjona roa: mety amin'ny satroka fisaka sy satroka fanatanjahan-tena izy.
● Ny fitaovana afaka mamoaka ny saron-doha miverina ary misoroka ny fandalo ny satroka miverina dia apetraka ao amin'ilay torolàlana latsaka satroka.
● Vondron'ireo switch photoelectric dia miorina amin'ny torolàlana latsaka cap. Hijanona ny masinina rehefa tsy misy satrony amin'ilay mpitari-dalana.
● Misy ny famantaran-tsofina fidirana tavoahangy mipetaka amin'ny capper.
● Misy fantsom-panafody aseptika eo anelanelan'ny kodiarana fanodinana sy ny faritra famenoana mba hamafana ny vokatra napetraka ao amin'ny faritra fikolokoloana bottleneck.
● Misy varingarina satroka arofanina eo amin'ny mpiray eo anelanelan'ny torolàlana latsaka satroka sy ny takelaka misaron-doha. Mahatsapa fa tsy misy sakafo tsy misy satroka.
● Amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny haavon'ny faritra rotary mba hifanaraka amin'ny haavon'ny tavoahangy samihafa.
● Ny antony manosika ny capper visy dia avy amin'ny rafitra voatosika ao anaty rafitra ary ampandalovin'ny fitaovana.
● Ny ampahany lehibe amin'ny capper dia manodina ny foibe fanodinana nomerika
Cap loader dia mampita ny satrony amin'ny masinina tsy misy satroka.
Izy io dia manana ny fiasan'ny tavoahangy tsy misy fatrany kapa, fanaraha-maso mandeha ho azy.
Misy switch detector ao amin'ny sorter cap, rehefa tsy ampy ny satroka dia mahazo famantarana ny tsy fahampiana cap ny detector amin'ny cap sorter dia manomboka ny elevator cap. Ny satroka ao anaty tanky dia mamakivaky ny mpampita fehikibo mankany amin'ny mpanao soroka. Izy io dia afaka manova ny haben'ny tsofin'ny tank amin'ny alàlan'ny solaitrabe; ity dia afaka manitsy ny hafainganam-pandehan'ny filatsahan'ny satroka.
4. conveyor fehikibo
Teo aloha: Tsipika milina famenoana zava-pisotro tsy misy gazy
Manaraka: Milina tavoahangin-tsakafo PET tavoahangy mafana
Tsipika milina famenoana alikaola feno karbaona
Tsipika milina famenoana zava-pisotro tsy misy gazy